Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ကျနော့် မေမေ နဲ့ အေရိုးဗစ်
Writer Sein Lyan Time 2:18 pm
ပျော်စရာမိသားစုလေးပဲနော်.. ဖိုးစိန်မေမေကို အားကျလိုက်တာ.. ပုံမှန်ကစားနိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူး..
ဟားဟား ဖိုးစိန်လေး အတင်းတုပ်နေတယ်လား
ဒါပေမဲ့ အမေ က သားထက် အများကြီး ပိုချော၏.....
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မိသားစုလေးနဲ့အတူ... ထာဝရ...
လမ်းလျှောက်ရင်ရော တူသလား .....။
ဖိုးစိန်ရော နှုတ်ခမ်းနီဆိုးပြီး မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတယ်လား။
ဒါကြောင့် တီချမ်းက သဘောကျတာဖြစ်မယ်။ ဟတ်ဟတ် :P
ဒေါ်လေးမေမေ, ဦးဦးဖေဖေ နဲ့ ........ တို့ပျော်နေရင် ပြီးတာပါပဲလေ...
I am glad they are happy and healthy.
တိုင်လိုက်ဦးမယ်.. ပြောချင်ဖူး ဒါပဲ
nice MAMAR :)
အဲ အဟိ ဘယ်လို ရေးရမလဲဟင်....
အမေတူသားလား အဖေ တူသားလား..သူများတွေလို့ပဲရေးလိုက်ရမလား...ဟင်
သာယာ ချမ်းမြေ့ပါစေ ရှင်...
ပျော်စရာကြီးနော်...အရေးအသားကလဲ ကောင်းတော့...ချက်ချင်းကို မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင် .. ကြည်နူးသွားတယ်...။ အိမ်က မိသားစု ကိုလဲ လွမ်းမိတယ်။
ဘော်ဒီလေး လှလာလိုက်တာ တဲ့လား? ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ
မေမေနဲ့ ဖေဖေဆိုလဲ အဲ့လိုပဲ၊ ချစ်ကြတယ်၊
ကျန်တာတော့ မသိဘူး၊ အလှကြိုက်တာတော့ အမေတူတာ သေချာပါတယ်၊
ဒါနဲ့ ကို ဆိုပါလား
အန်တီက ဒေါ်နှင်းဆီနဲ့ တူတယ် .. :D
ခု လက်ရှိ လှနေ လန်းနေတဲ့ ပုံ ရန်ကုန်လှမ်းမှာလိုက်လေ ..း))
အကိုတို့ မိသားစုအကြောင်း စာတွေဖတ်ပြီး ကြည်နူးမှုတွေ အမြဲ ကူးစက် ခံစားရတယ် ..း))
ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာပါ ဖိုးစိန်။
ခေတ်နဲ့အမှီလိုက်နေတဲ့ မေမေပေါ့လေ။ အလှကြိုက်တာချင်းတူတယ်ဆိုတာ ယုံတယ်။း)
အမေတူသားတဲ့ ပြောကုန်ကြပြီး))))
ပို့ စ်ကိုဖတ်ပြီး သဘောကျနေတုန်း... အောက်က တယောက်သောသူရဲ့ ကော်မန့် ဖတ်ပြီးး..... ငါတော်တော် မသိသေးတာတွေ ရှိနေပါပေါ့လားလို့ သဘောပေါက်သွားတယ်...
မောင်ချစ်တဲ့ချစ်ချစ်၊ ချစ်ချစ်ချစ်တဲ့မောင်၊ကလဲ မာမီ့အတိုင်းပဲ လှမှလှပါ။။။ အဟတ်
ဒါကြောင့် မောင်ချစ်တဲ့ချစ်ချစ်က ချစ်ချစ်ချစ်တဲ့မောင့်ကိုချစ်တာပေါ့....း))